Kalakhabar:: ‘यो कुरो अहिलेलाई गोप्य राखौँ’– गायिका शिलु
‘यो कुरो अहिलेलाई गोप्य राखौँ’– गायिका शिलु
प्रकाशित मिति : Sunday, August 12, 2018
शिलु भट्टराईगायनमा जम्दै गरेकी गायिका हुन् । गुल्मीमा जन्मिएर लोक गीत सङ्गीतलाई अँगाल्दै आएकी उनले ४ वर्ष अगाडि यो क्षेत्र रोजेकी थिइन् । छोटो समयमै श्रोताको मनमा दर्बिलो डेरा जमाउन सफल उनको पहिलो गीत ‘घुम पाकुम घुम’ हो । उनलाई गायनमा उचाइ दिने काम भने ‘मुखियाको छोरो’ले गर्यो । त्यसपछि उनका ‘ठाउँको ठाउँ ढल्ने गरी’, ‘भँगेरी चरी’ जस्ता गीत हिट भए । यी गीतको सफलताले उनलाई स्वदेशको साङ्गीतिक कार्यक्रममा समेत व्यस्त बनायो । ४ वर्षको छोटो सङ्गीतिक यात्राको क्रममा उनी देशको प्रायः कुना कन्दरासम्म पुगेर सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न सफल भएकी छन् । उनका करिब आधा दर्जन एल्बम बजारमा आएका छन् । यसको अलवा उनले अन्य गायक गायिकाको दर्जन हाराहारी गीतमा स्वर भरेकी छन् । हसिलो अनुहार मिलनसार स्वभावकी उनी स्कुटीमा सवार गर्न रुचाउँछिन् । यिनै गायिका शिलुलाई दश प्रश्न ।
गायिकाहरू सौन्दर्यतिर ध्यान दिँदैनन् भनिन्छ नि ?
– यो गलत हो । गायिका पनि लेडिज नै हो । लेडिज भएपछि सौन्दर्यतिर त ध्यान अवश्य हुन्छ । ‘मन राम्रो हुनुपर्छ । फेस राम्रो हुनुपर्दैन’ भनेर पनि भन्ने गरिनछ तर यो कुरो म मान्दिन । जुनै मानिसलाई पनि सुन्दर हुन मनपर्छ । म आफै पनि ब्युटिसियन हुँ । राम्रो बन्न कसैले सिकाउनु पर्दैन । क्रिम, पाउडर, गाजल हर हमेसा लगाउँछु ।
फेसनतिर रुचि छ कि छैन ?
– फेसनमा रुचि त छ तर सिम्पल पहिरन लगाउन मनपर्छ । म धेरै राम्रो देखिने पहिरन सारी नै हो । म मात्र होइन, अधिकांश महिला सारीमा नै राम्रो देखिन्छन् । तर धेरै प्रयोग गर्ने फेसन गाउन हो ।
दैनिक कति समय रियाज गर्नुहुन्छ ?
– धेरै त गर्न भ्याउँदिन । नियमित आधा घन्टा गर्ने गरेकी छु ।
गायिकालाई मोडलिङमा पनि देख्न सकिन्छ नि ?
– हो, धेरै गायिकाले त्यसो गरेको देखेकी छु । मैले पनि केही पहिले आफ्नै एक गीतमा मोडलिङ गरेकी थिएँ । गायिका आफैले मोडलिङ गरेको मलाई ठीक लाग्दैन । किनभने गायिकाले मोडलिङतिर ध्यान दिनथाले पछि गायन बिगार्ने गर्दछन् । गायिकाले नै मोडलिङ गरे मोडलले के काम गर्ने नि ?
मनपर्ने हिरो ?
– धेरै छन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका प्रायः सबै मनपर्छ ।
गायनको पहिलो कमाइ ?
– बागलुङको एक कार्यक्रममा गीत गाएर १५ हजार बुझेकी थिएँ । सो कमाइ खर्च नगरी आमालाई दिएँ । आमाले जन्माएर अहिलेको अवस्थासम्म पुर्याउनु भएको हो । त्यो पैसाको हकदार उहाँ नै हो भन्ने ठाने मैले ।
अहिलेसम्म त्यस्तो केही छैन । म त गायनमा आएको भर्खर ४ वर्ष भयो । आफूले सोचेभन्दा धेरै पाइरहेकी छु ।
– महिलालाई आदर गर्ने, अनुशासन भएको, काममा लगनशील केटा मनपर्छ ।
फ्यानबाट के–कस्ता उपहार हात लागे ?
– फ्यानबाट पाएको सबैभन्दा ठूलो उपहार ‘माया’ हो । उहाँहरूले मेरो गीत सङ्गीत मनपराइदिनु भएको छ । अन्य गिफ्ट आस गर्दिनँ ।
प्रेम छ, कि छैन ?
– यो कुरो अहिलेलाई गोप्य राख । विवाहित हो, होइन पनि अहिले भन्दिनँ ।